Jonga zonke iiMveliso zethu zoMnqweno yimfumba - Gamepron
Thenga eyona midlalo iphambili yePC
Nceda uqiniseke ukuba inkqubo yakho inokuqhuba ukukopela ngaphambi kokuyithenga.
Nceda uqiniseke ukuba ujonga imeko yokukhohlisa ngaphambi kokuthenga.
I-Fornite EzWin yenzelwe ukunceda abasebenzisi ukuba bafumane iziphelo ezininzi ze- “Victory Royale” njengoko befuna. Nge-Fortnite Aimbot kunye ne-ESP emangalisayo, olu lukhetho olufanelekileyo kulo naliphi na inqanaba lokugenca.
I-Fortnite ngumdlalo onzima ukuwulawula ngamanye amaxesha, kodwa ayisiyiyo ingxaki kuwe-thenga isitshixo semveliso ye-Fortnite White namhlanje!
Indawo yokulwa yomdlali engaziwayo
Ukwehliswa kwabachasi bakho kunye neendawo zokulwa ezingaziwa nguMdlali oMdaka eBlue kwiGamePron! Inika iPUBG Aimbot kunye ne-ESP ebandakanya konke, phakathi kwezinye izinto.
I-PUBG Nvidia yenzelwe ukunceda amalungu e-GamePron ukuba aphumelele kangangoko athanda. I-PUBG Nvidia inempawu zeRadar kunye ne-ESP, kunye nezinye izinto ezenzelwe ukukunceda ugqwese.
I-Intel yenye ye-PUBG Cheat enokutshintsha yonke indlela yakho, njengoko ungayi kwimidlalo yakho uswele ukuzithemba. Injongo yakho ayisayi kuba ngumcimbi ngesi sixhobo!
I-PUBG Rage izokubeka kwindawo yokuphumelela imidlalo yakho, nokuba udlala iSolo okanye iiQela. Khusela i-dub ngokulula!
Indawo yokulwa yomdlali engaziwayo ayisengowomdlalo oxinzelelekileyo oza kuwudlala xa unePUBG WR ukuba uncike kuyo. Bonisa abachasi bakho ukuba unamandla kangakanani!
Indawo yokudlala yoMdlali engaziwayo yeLITE Hacks
Yenza bonke abachasi bakho kwiindawo zokulwa ezingaziwa zeMidlalo yoMdlali ngaphandle kokusebenza ngokubila usebenzisa iPUBG Lite Dream Hack!
Gcina ingqondo yokhuphiswano, nokuba izinto ziba nzima! Akukho mntu unokukunqanda ukuba uphumelele nge-PUBG Lite Czar Hack.
I-Apex Legends izokuvuza kuphela abadlali abanezakhono, kodwa kulungile kuthi. Sebenzisa i-Apex Legends Classic cheat yinto eqinisekileyo!
I-Apex Legends Atom kukukopela okwaphuhliswayo ukulungiselela abasebenzisi abakhangela amanqaku ngakumbi kunokuba kufunyenwe kuthotho lwe-Apex Legends.
Ihlathi kukukhaba okuxhotyiswe ngokufanelekileyo ukulungiselela abadlali beNgcaciso ye-Apex yalo naliphi na inqanaba lesakhono, kwaye ilungile kwabo bazama ukuqhekeza okokuqala.
I-Intel yi-Apex Legends Hack esebenza kakuhle kwiinkqubo ezisekwe kwi-Intel, kwaye inokusetyenziswa ngaphandle kokukhathazeka (njengoko zonke izinto zethu zokukopela zingafunyanwa ziinkonzo ezichasayo).
Imilenze emininzi yimfumba
I-Apex Legends Multi-Legit inegama elifanelekileyo, njengoko ungasisebenzisa esi sixhobo ukuzimela phakathi kwezithunzi kwaye uthathe iintshaba zakho nganye-nganye!
I-Apex Legends isaphakama ngokubhekisele kukuthandwa kwemidlalo, kodwa uthini ngee-Apex Legends hacks? Xa ungafuni ukuvavanya ithamsanqa lakho, i-GamePron iya kuhlala ine-Apex Legends WR ye-hack ukunceda.
Olu qhekeko lwaphuhliswa endlwini, luqinisekisa ukuba umgangatho ofunyenwe ngaphakathi kwe-RB6 Siege GamePron hack awusoze uthelekiswe!
I-RB6 Olima Hack iseyinto elungileyo kwabo bajonge ezinye izixhobo xa bezama ukutshintsha iRB6 Cheat yabo yangoku, kodwa isasebenza kwabaqalayo.
Sebenzisa ii-RB6 Hacks zethu ngaphandle kokukhathazeka kwiinkqubo zakho ze-Intel! Ukufumana ukufikelela kwi-Apex Legends Hack ekhokelela apha kwi-GamePron.
I-RB6 Classic Hack yethu inokubonakala ngathi ziindaba ezindala kwabanye, kodwa kukho isizathu sokuba abasebenzisi basayithande. Ziva amandla ngokwakho GamePron!
I-Classic Rust Hack yethu iya kukunika ukufikelela kwiimpawu eziqhelekileyo (njenge-Aimbot okanye iWallhack), kodwa kukho ezinye ezininzi oya kuthi uxhamle nakuzo.
I-Rust Forest ayizukunceda kuphela abasebenzisi beMidlaloPron ukuba baphile ngelixa bedlala, kodwa uya kube uhlasela kwaye uchuma kuyo yonke indawo ngaphandle kokukhathazeka.
I-Rust Hack efanelekileyo iya kukuguqula ube yinkosi yeseva yakho, kwaye iRust Hoplit sisisombululo esifanelekileyo malunga nabani na ofuna ukukopela.
Usenokuxhamla kwiiRust Hacks zethu ukuba usebenzisa inkqubo esekwe kwi-Intel, konke okufuneka ukwenze kukufikelela kwiRust Intel Hack yethu!
URust Posh waphuhliswa ukuba asebenze kwinqanaba lokuzinikela ngakumbi, kodwa oko akuthethi ukuba abaqalayo abanakho ukuxhamla kolu khululo.
Ngena kwisenzo kwangoko kunye nommangaliso weRust WR! Xa usebenzisa izixhobo ezingathembekanga, uya kuthintelwa okanye utyhalelwe abanye abadlali-thintela yonke loo nto kwaye usebenzise ubuqhetseba beRust WR.
Intloko yinkqubo elula xa usebenzisa iValorant Hyper Cheat! Izakhono zakho akufuneki zibe zezona zichazayo xa usebenzisa i-GamePron.
Ngaba ufuna ukusebenzisa eyona yeValorant Hack ikhe yangena kwimarike? Ngokuhlaziywa rhoqo kunye neempawu ezininzi ezincedo, i-GamePron Valorant Hack kunzima ukuyibetha.
I-Valorant Multi-Legit kukuqhatha kwabo bafuna i-Aimbot eyomeleleyo engaphosi ukudubula ngenxa yomsindo. Ukuba ufuna ukudlala i-legit, sebenzisa i-ESP kunye ne-2D Radar!
ICandelo 2 ngumdlalo onzima ngokwawo, ke ayikhe ibabuhlungu ukufumana uncedo oluncinci. Sebenzisa iCandelo lesi-2 u-Olima Hack ukuqinisekisa ukuba uza kuphumelela, ngaphandle komdlalo.
Ukubalekela eTarkov kunebhotshi enzima kunye nabadlali ukuba baphumelele, kodwa usengakwazi ukuqhubeka ngenkqubela phambili ngokusebenzisa iPosh Escape kwiTarkov Hack!
Nge-GamePron Olima Hack, uya kuhlala unenzuzo xa usilwa nabachasi. Nokuba zii-AI okanye abadlali bokwenyani, ayinamsebenzi!
Oomatshini abasekwe kwi-Intel basenokuba nexesha elinzima lokubaleka, kodwa ngombulelo, kufuneka sibaleke eTarkov Intel Hack kwabo basebenzisi bayifunayo.
Zuza kwi-GamePron kwaye yazisa ukhuphiswano lwakho ukuba awuphazamisi! Sebenzisa ukubaleka kwethu kwiTarkov Alpha Cheat ukuya phambili (kwaye uhlale apho).
Ukubalekela eTarkov ngumdlalo oxinzelelekileyo onamava, kodwa sinokuyilungisa loo nto! I-EFT Classic kukuphuma kwayo konke eTarkov ukukopela obukade ukufuna.
Ukubalekela eTarkov kunokukwenza (okanye ukwaphule) ngokulula. Kulumkele la maxesha anzima ngelixa udlala ngokusebenzisa i-EFT WR hack ukuhlala ngaphambili! Akukho nto inokwenziwa ziintshaba zakho ukunqanda ngoku.
Imfazwe yanamhlanje ihleli iyinkolo yobuhlobo kule minyaka idlulileyo, kwaye entsha ayifani. Inkqubela phambili ngesantya usebenzisa iMfazwe yangoku yeMultig-Legit kugula!
Ubushushu obuninzi yimfumba
Imfazwe yanamhlanje I-Multi-rage yenzelwe ukunceda abasebenzisi ukuba bafumane impumelelo engakumbi kwiMfazwe yangoku ngaphandle kwesidingo sayo yonke "imithwalo eyongezelelweyo". Fika kwizinto ezilungileyo ngeGamePron!
Imfazwe yangoku i-Intel inokusetyenziswa ngoomatshini abasekwe kwi-Intel ukuqinisekisa ukuba ayizukubakho imicimbi yokuhambelana xa kuziwa ekusebenziseni ukukopela.
Ukulwa kweMfazwe yangoku kuya kukunika zonke izinto ezimangalisayo ezifumaneka kwiiHacks zeMfazwe zangoku, nomsebenzi omncinci obandakanyekayo.
I-Warfare Camo yanamhlanje iya kuvula yonke into kumdlalo, ivule onke amadoda aneZinamathiselo, iiReticles, iiCamouflages, abaSebenzisi kwaye ikunike iiplani ezi-4 kwinqanaba 1.
Faka i-ESP ngolwazi oluneenkcukacha; I-Aimbot egudileyo kunye ne-FOV; Ixhasa Windows 10; Iyahambelana neNvidia kunye ne-AMD GPU.
IWarzone yimowudi yomdlalo onamandla oza kuvuza kuphela abadlali abagqwesileyo, ke zenze enye ngokusebenzisa iWarzone Multi-Legit Hack!
Fumana imvakalelo yokuba umntu ophumeleleyo kumdlalo weWarzone ufumana ukubeka ithemba lakho kwiMfazwe yethu yanamhlanje yeMulti-Rage Hack! Awuyi kuzisola.
Iikhompyuter ezisekwe kwi-Intel zisenokuxhamla kwizinto ezimangalisayo ezifumaneka kwiiNkohliso zemfazwe zangoku, ukuba nje uneMfazwe yangoku ye-Intel Hack.
Ukulwa kweMfazwe yangoku kuya kugcina izinto zobuqili ngelixa kugqogqwa, kuvumela abasebenzisi ukuba bagxile ngakumbi kumdlalo okwangoku. Zonke izixhobo azibonakali apha, kodwa eli linqanaba elitsha ngokupheleleyo!
I-Overwatch iye yanamathela kwaye yahlala ithandwa nangona ikhutshiwe kwiminyaka eliqela eyadlulayo, kwaye iAverwatch Artemis ilapha ukuxhasa abo basadlalayo.
I-Overwatch i-Neon ithathwa njengenye yezona hacks zinamandla ezikhoyo kulo mdlalo, kwaye ngekhe siphikise loo nto! Kulapha ngesizathu emva kwayo yonke loo nto.
Gwema umbulali (okanye usukele abo basindileyo) ngokulula kumatshini osekwe kwi-Intel ngokusebenzisa abaFileyo ngoKhanya kwe-Intel. Abayi kuyazi nento ezayo!
Abafileyo nguMini weHoplit yenzelwe ukugcina abasebenzisi kwindawo efanelekileyo yokuphumelela ngokusemandleni, ekusenokwenzeka ukuba kutheni amalungu e-GamePron eyonwabela kakhulu.
Bhala bonke abachasi bakho kwi-Oasis ngoncedo oluncinci oluvela kwi-GamePron! Usebenzisa i-Oasis Intel Hack yethu, abekho abanye abadlali abanokumisa.
Ukutshabalalisa 2 kunokubonakala ngathi kukugaya ngamanye amaxesha, kodwa yinto esinokukunceda ngayo! Sika ixesha lakho lokusila phantsi usebenzisa i-Destiny 2 Intel Hack.
Ukutshabalalisa 2 ngumdlalo onzima kumbindi wayo, kodwa sikwenza kube lula kakhulu ukusebenzisa ii-SC cheats (Aimbot & Wallhack) ezixhasa zombini i-AMD kunye ne-Intel CPU!
Nge-Dead Side Intel Cheat yethu, abantu bazokuzibuza ukuba uyenza njani le midlalo ingenabuntu. Into elungileyo zonke iinkohliso zethu azibonakali!
Ukudlala iBarfield 5 kungangumdaka ngamanye amaxesha, yiyo loo nto ukusebenzisa indawo yethu yeDabi 5 Intel Cheat ukukhusela impumelelo yakho kuhlala yeyona nto ibalulekileyo kubasebenzisi.
Imfazwe ebandayo iHacks
Sebenzisa iMfazwe ebandayo i-Intel Hack iya kwenza oomatshini abasekwe kwi-Intel baxhamle njengaye nawuphi na umntu! Ngomlo wethu obandayo we-Aimbot kunye neWallhack, ukuphumelela sele kumbovu.
I-Call of Duty Black Ops: Imfazwe ebandayo ye-SC iya kuvumela abasebenzisi beGamPron ukuba babone iziphumo zemidlalo ngokwabo, njengoko sibeka amandla ezandleni zabasebenzisi bethu.
Ifowuni yeDuty Ops emnyama: Imfazwe ebandayo GamePron sisixhobo esifanelekileyo kuyo nayiphi na umdlalo. Iindlela zomdlalo ozithandayo kakhulu ziya konwaba ngakumbi xa umlo wethu weCold War GamePron usebenze!
Imfazwe ebandayo Hush yenye ye-Cold War hack eyilelwe ukunceda abona badlali bazinikeleyo kwi-Intanethi. Gcina abakhuphisana nabo ngaphandle kokophula ukubila usebenzisa iHold War War Hush!
Kuphephe konke oko kuvalwa okukruqulayo okhe wajongana nako ngaphambili! Sebenzisa i-GamePron HWID Spoofer ukukhohlisa iiseva ekucingeni ukuba ungomnye umntu.
Nge-QC HWID Spoofer yethu, ungadlala yonke imidlalo enqatshelwe ngaphandle kononophelo emhlabeni. Awusoze wavalwa ngokwenyani ngelixa usebenzisa le nto!
IHypape Scape Hacks
I-Hyper Scape GamePron ye-Hack yethu ayikhathalelwa, njengoko abasebenzisi sele belazi uhlobo lwamandla agcinwe kwisixhobo esinjengalesi. Sukujonga phambili ukuba ufuna yonke into ejikeleze iHyper Scape Hack!
IHyper Scape Cloud ibandakanya zonke ezona mpawu zinamandla zeAimbot ezifumaneka kwezinye izixhobo zethu, ngochukumiso olwahlukileyo oluphoswe kumxube. Jonga ukuba ibuzz ithini kuwe!
I-Anarea Battle Royale Blue yiAnarea Hack eya kuthi ivumele abasebenzisi ekugqibeleni baphumelele ngaphandle kokuzabalaza besola izixhobo ezifunekayo. Dlala umdlalo ngesantya sakho!
Phakathi kwethu Hacks
Nokuba uziva ngathi umntu othile “usus” okanye ufuna nje troll abantu abambalwa, usebenzisa yethu Phakathi kwethu Coco Cheat izakusebenzela imimangaliso.
Zombies kunye nabanye abadlali baya kuhlala bezama ukonakalisa ulonwabo lwakho, kodwa ukusebenzisa iAlpha DayZ Hack kuya kubathintela ngokulula ekwenzeni njalo!
Ngomhla wethu we-DayZ Olima Hack, awusoze uzibuze ukuba ziphi na iintshaba okanye eyona nto iphambili. Sinikezela ngenketho ye-ESP yamalungu e-GamePron!
I-DayZ Intel yenzelwe ukusebenza ngoomatshini abasekwe kwi-Intel ngokugqibeleleyo, inika abo basebenzisi ithuba lokufumana yonke i-GamePron ekufuneka ibonelele nayo.
Ukuwa kweGay Guys
I-Fall Guys cheats (njengeFly Mod, akukho kungqubana, kunye nabanye abaninzi) inokufumaneka apha kwi-GamePron kunye nokuwa kwethu kweHops Guy Hoplit.
Isihogo Masikhulule iiHacks
I-Hell Let Loose Intel ivumela abasebenzisi be-Intel ukuba baxhamle kwizinto ezimangalisayo ezifumaneka kwiHell Let Let Loose Hacks ngaphandle kokukhathazeka. Lawula isiphumo somdlalo ngokwakho ngeGamePron!
IPUBG Iselfowuni (i-Android) iiHacks
I-PUBG Imfono mfono (Android) i-TX yethu iya kukuvumela ukuba uphumelele njengomdlali ohambahambayo, ukuya kuthi ga apho unokubeka khona "izakhono" zakho ngokuchasene nomntu odlala kwikhompyuter.
PUBG Iselfowuni (i-Emulator) iiHacks
Sebenzisa i-PUBG Mobile (i-Emulator) Gloop ukutshabalalisa konke yemiphefumlo elusizi eyenzeke kumhlaba wokungenisa iindwendwe ngelixa udlala kwikhefu labo lesidlo sasemini.
Olunye ukhetho olumangalisayo kukusebenzisa i-PUBG Mobile (i-Emulator) ye-LD, ekuvumela ukuba usebenzise zombini iihacks kunye nemouse / ikhibhodi ngelixa udlala iPUBG Mobile.
Ngaphandle kweempawu zokukhangela ezifumaneka kwi-PUBG Mobile (i-Emulator) Magnum, uyakuqonda ukuba kulula kangakanani ukulawula umdlalo wePUBG Mobile ene-emulator.
NgePUBG Mobile (Emulator) Venom, ngekhe ubekho imeko apho uziva "unamandla" ngelixa udlala. Ihlala ibheja umdlalo wakho ukuze uphumelele ngeGamePron!
Inkampani yeRogue ngumdlalo omtsha ngokwentelekiso, kodwa loo nto ayisivimbanga ukuba sikhuphe iRog Company Intel ngokuzithemba. Ukutshabalalisa abachasi bakho usebenzisa i-GamePron!
Abo basebenzisa oomatshini abasekwe kwi-Intel kwaye bafuna ukukhula kwi-Spell Break abanakujonga ngakumbi, njengoko i-Spell Break Intel Hack yethu inayo yonke into oyifunayo.
I-Squad Intel izakuvumela abasebenzisi beMidlalo yePron ukuba baxelele isantya sokulwa ngelixa bedlala iQela, ukubanika ithuba lokubamba phezulu kuwo onke amadabi.
IWarface Blue iya kunceda abo kuni bazinikezele kwinkqubela phambili yomdlalo nangaphezulu (ngaphandle kwengxaki ebandakanyekileyo, kunjalo). Fikelela ezona zinto zilungileyo kwiWarFace kuHlelo lokuSebenzisa GamePron.
I-GTA 5 iiHacks
Nokuba uceba ukuba ngukumkani omkhulu weziyobisi okanye ufuna ukuqhuba iqela lesithuthuthu, usebenzisa i-GTA 5 SC Hack iya kukuvumela ukuba wenze njalo ngaphandle kokungqubeka endleleni.
IPaladins Accento iya kuvumela amalungu eGamePron ukuba agqwese kwindima yabo ngelixa bedlala, nokuba ngabaphi abalinganiswa abathandayo. Phumelela ngakumbi ngokujoyina i-GamePron namhlanje!
Isandi sabadlali be-Elysium bahlala bekhangela inkohliso ethembekileyo ukuba bangathembela kuyo, kwaye ngoku bayifumene. I-ROE Accento Hack yethu inayo yonke into oyifunayo ukuze ubugcisa bemfazwe!
CS: Yiya Hacks
Ukulwa nokubetha: iAccento ekhubekisayo kwihlabathi liphela yeyona nto iphambili ye-CS: YOKUFUMANEKA kwi-Intanethi, eyenza ukuba ngokulinganayo idume njengomdlalo ngokwawo. Iimpawu ezibandakanyiweyo ngaphakathi kufuneka ukuba unayo!
Ngaba ukhathele kukuthatha isigqibo phakathi kokuphanga nokuziphindezela? Fumana okona kulungileyo kwihlabathi kunye ne-Intel Hunt: Shownown Hack!
Uqhushululu: IiHacks zesaqhwithi
Ngaba ufuna ukufikelela? Thenga isitshixo semveliso namhlanje kwaye unokujoyina amanqanaba amanye amalungu e-GamePron elite!
UkuBuyiselwa ngokuBomvu okuBini iiHacks